Uhlobo lwensizakalo yokuhlola
Ukuhlolwa kwefektri Ukukusiza uqonde umphakeli ,Kubandakanya . uhlelo lokulawula ikhwalithi, ukuphatha nezinqubo zokusebenza.
Ukuhlolwa kwangaphambi kokukhiqiza Ngaphambi ukukhiqizwa ,usizo ni wena qiniseka ukuthi izinto zokusetshenziswa kanye components will meet your specifications and are available in quantities sufficient to meet the production schedule.
Ngesikhathi sokuhlola ukukhiqizwa (i-DPI) Ihlola imikhiqizo ngesikhathi senqubo ukukhiqizwa futhi sizama konke okusemandleni ethu ukugwema ezinye ukukhubazeka kokuvela, Ingase futhi kukusize uhlole isimiso umkhiqizo futhi bavumelane ukuthi imikhiqizo alungele lapho isikhathi mpahla .
Ukuhlolwa kwangaphambi kokuthumela (i-PSI) Kuyinto kakhulu ukuhlolwa ngempumelelo eliqinisekisa ukuthi izinga lonke mpahla sika level. Ngokuvamile kudinga ukuthi ukukhiqizwa kube okuphelele okuyi-100% futhi okungenani ama-80% ezimpahla afakwe emabhokisini Amasampula ahlolwe akhethwe ngokungahleliwe ngokuya nge-AQL ejwayelekile.
Iyalayisha ukubhekwa Kuyisinyathelo esibalulekile ngesikhathi senqubo yokulethwa, kungaqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho ilayisha kahle futhi inciphise amathuba okuqhekeka. Ukuqinisekisa ikhwalithi enhle nesimo sesimo semikhiqizo yakho uze uyithole.
Kungani ngidinga ukuhlolwa noma ukucwaningwa kwefekthri?
Uma kwenzeka kunanoma yiliphi ikhwalithi Elimpofu, ukuthunyelwa okungalungile, imininingwane engeyona eyivela kubahlinzeki ngesikhathi sokuhweba kwamanye amazwe. Ukuhlola kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokuvikela izinzuzo zomthengi.
Uhlola ini ngesikhathi sokuhlola?
Imikhiqizo ehlukahlukene izoba namaphuzu wokuhlola ahlukile. Ngakho-ke isigaba sokuhlola sizofundwa njalo ngokucophelela phakathi kwekhasimende nemenenja ye-akhawunti yethu.
Ngokuvamile, ngezanzi jikelele ukuhlolwa ububanzi ukulandela:
2. Incazelo Product / Spec
4.Function / ipharamitha ukuhlola
5.Packaging / Ukumaka isheke
idatha 6.Product nesilinganiso
7.Client imfuneko ekhethekile
Lithini izinga Lokuhlola?
Izinga elijwayelekile lokubandakanya konke lokuhlola liyi-USD 168-288 ngosuku ngosuku emadolobheni amaningi aseChina ngaphandle kweHongkong, eTaiwan. Leli zinga elijwayelekile lifinyelela emahoreni angama-12 okusebenza isabelo ngasinye (kufaka phakathi ukuhamba, ukuhlola nokulungiselela umbiko). Akukho mali ekhokhwayo yezindleko zokuhamba nezokuhlala zabahloli.
Ungaqala kanjani ukuhlola?
Iklayenti lisithumelele ifomu lokubhuka kanye nencwadi ezinsukwini ezingama-2-3 ngaphambi kwesikhathi. Sithinta i-Factory ukuqinisekisa imininingwane yokuhlola. Iklayenti Qinisekisa uhlelo lokuhlola bese ukhokha. Senza ukuhlola futhi iklayenti lithole umbiko wokuhlola kungakapheli amahora angama-24.
UFUNA UKUTHOLAKALA KAKHULU?